7KW ထုတ်လုပ်သူများ | တရုတ် 7KW ပေးသွင်းသူများနှင့်စက်ရုံ
EV Wallbox Comercial Charger AC7KW Socket နှင့် Cable Connector ပါ ၀ င်သည်
Product Feature 7KW EV Home Charger သည်သီးသန့်သုံးရန်အထူးဒီဇိုင်းထုတ်ထားသောအမြင့်ဆုံး 32A output current ရှိသော single AC အဆင့်အားသွင်းကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပေါ့ပါးသွက်လက်သောဒီဇိုင်းနှင့်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောအရွယ်အစားတို့ဖြင့်သင့်အိမ်နှင့်ကုမ္ပဏီအတွက်စံပြဖြေရှင်းချက်တစ်ခုဖြစ်သည့်အာကာသကိုချွေတာရန်နှင့်လည်ပတ်ရန်လွယ်ကူသည်။ အားသွင်းစက်သည် IP65 အထိကာကွယ်ပေးပြီး indoor နှင့် outdoor applications များအတွက်သင့်တော်သည်။ ၎င်းသည် floor-stand တပ်ဆင်ခြင်းတွင် wall-mount တပ်ဆင်ခြင်းကိုထောက်ပံ့သည်။ built-in WIFI module တစ်ခုနှင့် OCPP ဆက်သွယ်ရေး p ...
EV Wallbox Commecial Charger AC7KW သည်အမျိုးအစား ၁ သို့မဟုတ်အမျိုးအစား ၂ ကေဘယ်နှင့်မဆိုလိုက်ဖက်သည်
ကုန်ပစ္စည်းအင်္ဂါရပ် 7KW စီးပွားဖြစ်အားသွင်းစက်ကို RFID အထောက်အထားစိစစ်ခြင်းဖြင့်လူအများအသုံးပြုရန်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ အမျိုးအစား ၂ အားသွင်းပေါက်နှင့်တပ်ဆင်ထားပြီးအားသွင်းကြိုးသည်အမျိုးအစား ၁ သို့မဟုတ်အမျိုးအစား ၂ ကေဘယ်နှင့်မဆိုလိုက်ဖက်သည်။ စက်မှုစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီစီးပွားဖြစ် ev အားသွင်းစက်သည်လုံခြုံမှုကိုတိကျသေချာစေရန်နှင့်တပ်ဆင်ထားသော RCD ကိုသေချာစေရန် MID အသိအမှတ်ပြုမီတာကိုအသုံးပြုသည်။ အားသွင်းစက်တွင် 6mA DC ယိုစိမ့်မှုထောက်လှမ်းခြင်းလည်းပါ ၀ င်သည်၊ RCD type B. ၏စျေးကြီးသော upcost တစ်ခုလိုအပ်ချက်ကိုအားဖြည့်ပေးနိုင်သည်။
EV အားသွင်းရန်အတွက် EV Wallbox Home Pro Charger AC7KW
အင်္ဂါရပ်များ Flexible multi-protocol ဒီဇိုင်း: CCS, CHAdeMO, GB/T； Charging Protocol： OCPP1.6； CMS နှင့်ပေါင်းစည်းရန်ကြိုး/ကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်မှု ဖောက်သည် interface အတွက်အသုံးပြုရလွယ်ကူသော LCD display IP54 ပြင်ပအားသွင်းစခန်း မတူညီသောစံနှုန်းများနှင့်ကိုက်ညီသောအားသွင်းကိရိယာများကိုပံ့ပိုးနိုင်ပြီးသင်၏လိုအပ်ချက်အတိုင်းစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ အားသာချက် Newyea AC wallbox သည်စျေးကွက်တွင်ဆန်းသစ်ပြီးတန်ဖိုးမြင့်အိမ်သုံးအားသွင်းစက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်ထံမှမျှော်လင့်ထားသောထူးခြားသောအရည်အသွေးကိုပေးသည်။
APP ထိန်းချုပ်မှုဖြင့် EV WallBox Pro-Smart Charger AC7KW
အင်္ဂါရပ်များရိုးရှင်းသောအားသွင်းပလပ်နှင့်ကစားရန်အလွန်အဆင်ပြေလွယ်ကူသော Real-time Display ဗို့အား၊ အချိန်၊ အခြေအနေ၊ အမှားနှင့်ပါဝါ တစ်ချက်လောက်ကြည့်ရင်အားလုံးသိလိမ့်မယ်! ပေါင်းစပ်မှုမြင့်မားပေါင်းစည်းမှုနှင့်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောဒီဇိုင်းသည်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်မှုကိုပိုမိုလုံခြုံမှုရှိစေရန်အားသွင်းကြိုးတွင် over-current, over-voltage, surge, low voltage, leakage protection နှင့် DC protection တို့ပါ ၀ င်သည်။ အားသာချက်များ Super screen 4.3” super screen, screen information ကိုအလွယ်တကူစစ်ဆေးနိုင်သည်။ Switch ဒီဇိုင်းကို Plug in လုပ်ပါ၊ ထို့နောက် switch သည်စတင်နိုင်သည် (သို့) ...
OCPP 1.6 & 2.0 နှင့် EV Wallbox Pro-Smart Charger AC7KW
ထူးခြားချက်များကုန်သွယ်အားသွင်းစီမံခန့်ခွဲမှု OCPP Protocol ဖြင့်သင်၏အားသွင်းဘူတာကိုအဝေးမှထိန်းချုပ်ပါ။ စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်အစီရင်ခံခြင်း။ ပါဝါသုံးစွဲမှုကိုခြေရာခံပြီးညှိပါ။ စီးပွားရေး။ သင်၏စွမ်းအင်အကောက်ခွန်ကိုရွေးပြီးသင်၏ EV အားသွင်းရန်စျေးအသက်သာဆုံးအချိန်ကိုစနစ်ကအလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်ပါစေ။ အားသာချက်များပိုမိုတာရှည်ခံ PV VO အထူးမြင့် pc ပစ္စည်းများသည်မွှေနှောက်ပစ်ခြင်းနှင့်အခြားကြမ်းတမ်းသောပတ်ဝန်းကျင်တို့ကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ OCPP အပြည့်အဝလုပ်ဆောင်ချက်ကျွန်ုပ်တို့၏အားသွင်းပုံတွင်အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်များအပါအ ၀ င် ocpp1.6-J အပြည့်အ ၀ လုပ်ဆောင်ချက်များရှိသည်။ အဆင့်မြင့်အားသွင်းစနစ်၊ ...